ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): အကယ်၍
Thanks both Ko Thet Naing and Linn Let for this speech-poem "If". It makes us stronger...
အဲဒါ ကဗျာလေးပါ၊ အန်တီစုက ယူသုံးတာပါ။
It's Aunty Su's translation of If by Rudyard Kipling.
He has another poem: Mandalay here:
If is here: